थ्रीजी छोडी फोरजीमा आउन किन चाहँदैनन् टेलिकमका प्रयोगकर्ता ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
आखिर के हो आईफोन पछाडिको यो कालो थोप्लाको
थ्रीजी छोडी फोरजीमा आउन किन चाहँदैनन् टेलिकमका प्रयोगकर्ता ?
विगत एक डेढ वर्षदेखि नेपाल टेलिकमले फोरजी नेटवर्क विस्तार गर्न थालेको हो । अहिले यसको कभरेजलाई देशव्यापी बनाउने गरी काम भइरहेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यही नै हो ।
जबसम्म यसको पहुँच व्यापक हुँदैन, तबसम्म यसको राम्रो सदुपयोग हुने अपेक्षा गर्न पनि कठीन हुन्छ । त्यसै अनुरुप आजको दिनमा देशका ७७ जिल्लाका ६८१ वटा स्थानीय तहमा टेलिकमको फोरजी सेवा पुगिसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमले ब्याण्ड थ्री अर्थात १८०० मेगाहर्जको फोरजी सेवा सहरी र घना वस्ती भएका स्थानमा उपलब्ध गराइरहेको छ भने ब्याण्ड २० अर्थात ८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । हामीले यसरी फोरजीको डिप्लोइमेन्ट गरेर सञ्चारको हाइ-वे विकास गर्‍यौं ।
यसले डेटा धेरै आवश्यक पर्ने कन्टेन्टका लागि पर्याप्त ब्याण्डविथ उपलब्ध हुने आधार तयार भएको छ । हाम्रा प्रयोगकर्ताले थ्रीजीको तुलनामा यसमा राम्रो अनुभव लिन पाएका छन् ।
जहाँसम्म फोरजीको उपयोग बढाउने कुरा छ, यसका लागि सम्पूर्ण ईकोसिस्टम नै चाहिन्छ । फोरजीको राम्रो अनुभव लिनका लागि उहाँहरुको सेटमा दुवै ब्याण्डको फोरजी चल्ने हुनुपर्छ ।
त्यस अनुरुप पहिलो कुरा त स्मार्टफोनको उपलब्धता नै हो । अहिले हाम्रो नेटवर्कमा ७२ देखि ७५ प्रतिशत स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता छन् । तर फोरजी चलाउने प्रयोगकर्ताको संख्या भने ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र छ ।
कतिपय प्रयोगकर्ताहरुसँग फोरजी चल्ने सेट छ । तर उहाँहरु थ्रीजीमै बस्न चाहनुहुन्छ । त्यसैले त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई फोरजीमा ल्याउन पर्याप्त सचेतनाको आवश्यकता पनि जरुरी छ । थ्रीजीबाट फोरजीमा जाँदा अतिरीक्त खर्च लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले पर्याप्त मात्रामा बुझाउन सकेका छैनौं ।
टेलिकमले फोरजीमा आधारित भीओएलटीई सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । हिजोको दिनमा मोबाइलमा डेटा चलाइरहँदा कल गर्नुपर्‍यो भने टुजी वा थ्रीजीमा फल ब्याक हुने गर्दथ्यो । जसले गर्दा डेटा डिसकनेक्ट हुने समस्या पनि थियो ।
तर आजको दिनमा तपाईंको मोबाइलले भीओएलटीई सपोर्ट गर्छ भने भ्वाइस कल पनि फोरजीमै हुन्छ । त्यो पनि एचडी अर्थात उच्च गुणस्तरीय हुन्छ । पहिलो प्राथमिकता नेटवर्कको कभरेज नै भएकाले हामी सुरुवाती चरणमा त्यतातर्फ लाग्यौं ।
नेटवर्क सेवाप्रदायकको हैसियतले त्यो हाम्रो दायीत्वको विषय पनि हो । जबसम्म हामीसँग उचित किसिमको आवश्यक कन्टेन्ट हुँदैन, हाईवे मात्रै भएर पनि हुँदैन । हामी आफैंले र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विभिन्न भ्यालु एडेड सेवाहरु दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।
यस किसिमको सेवा सिजनल र लक्षित समूह अनुरुप हुँदो रहेछ । अहिले हाम्रा प्रयोगकर्ताले अतिरीक्त पैसा नतिरी वा सस्तो मूल्यमा सेवा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ । त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सेवाहरु नै लोकप्रिय भइरहेका छन् र नेपालका लोकल भ्यालु एडेड सेवा त्यति लोकप्रिय हुन सकिरहेका छैनन् ।
हुन त रिङ ब्याक टोन, टोलफ्री, नोटिस बोर्ड, बल्क एसएमएस जस्ता परम्परागत भ्यालु एडेड सेवाहरु हामीसँग अहिले पनि छन् । अब हामी फोरजी नेटवर्क तयार भएसँगै एप्लिकेसनमा आधारित भ्यालु एडेड सेवामा पनि जाँदै छौं ।
उदाहरणको लागि फिक्स लाइनमा आईपीटिभी सेवा भए जस्तै मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुका लागि त्यही सेवा मोबाइल एपबाट दिने हाम्रो योजना छ । अरु निजी क्षेत्रले ल्याएका सेवाहरु पनि छन् ।
त्यस्ता सेवाहरु स्वास्थ्य, शेयर मार्केट, मनोरञ्जन, आदि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । ती सेवाहरु पनि चलिरहेका छन् । अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार धेरै जसो प्रयोगकर्ता भ्यालु एडेड सर्भिसका लागि धेरै खर्च गर्न तयार देखिँदैनन् ।
उनीहरुमा न्यूनतम मूल्यमा सेवा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । बाहिरको नेटफ्लिक्स जस्ता प्रिमियम प्रकारका सेवाहरु हामीकहाँ छैनन् । लोकल सीडीएन विकास गर्न सक्यौं भने हामीले स्थानीय कन्टेन्टलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छौं ।
सरकारले पनि त्यस्ता सेवा तथा प्रविधि दिने स्टार्टअपलाई सब्सिडी दिने र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा फोरजीको उपयोग पनि बढ्ने र सँगसँगै ग्राहकलाई पनि सस्तो मूल्यमा सेवा पनि दिन सकिने अवस्था रहन्छ ।
हुन त फोरजी नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट भएपछि यसको प्रयोग एकदमै बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा अरु विकल्प भएको अवस्थामा मूलरुपमा ग्रामीण क्षेत्रका जनता यसबाट अझ धेरै लाभान्वित भएका छन् ।
महामारीले गर्दा अनलाइन सिकाई, अनलाइन बैठक देखि अनलाइनबाटै काम गर्ने प्रचलन बढेको छ । जसले गर्दा ब्याण्डविथ खपत पनि एकदमै राम्रो भएको छ ।
देशव्यापी रुपमा फोरजी नेटवर्क विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले ठूलो लगानी गरेको छ । अहिलेको समयमा सबैभन्दा मूख्य कुरा भनेको डिजिटल कनेक्टिभिटी नै हो ।
त्यसैले यसमा लगानी गर्ने कुरा एकदमै जायज छ । लगानी भइसकेपछि त्यसको प्रतिफल लिनका लागि हामीले यसको उपयोग बढाउन सक्नुपर्छ ।
(शनिबार टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक तथा सह-प्रवक्ता रञ्जीत लोहियाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
टेलिकमले पायो फाइभजी परीक्षण गर्ने स्वीकृति, कहिले हुन्छ सुरु ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लिमिटेडले फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लिमिटेडले ९८ रेञ्जमा सिमकार्ड सकिएसँगै ९७६ र ९७४
हाम्रो बजारबाट नयाँ-पुराना सामान बिक्री गर्दा अमेरिका जाने मौका
फोटो पारखीका लागि सामसङले ल्यायो एड्भान्स फिचर भएको ‘एक्पर्ट रअ क्यामेरा’ एप
विन्डोज ११ इन्टरप्राइज भर्चुअल मसिन निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने
जनगणनामा नपरे पैसा नलाग्ने ‘टोल फ्री’ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने